Ankalazain’ny Tontolom-bolongana Maraokana Ny Vehivavy, No Sady Ifanakalozany Hevitra Ny Mikasika Ireo Fady · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Desambra 2017 12:44 GMT
Nanome voninahitra ilay vehivavy, izay, nankalazain'izao tontolo izao androany, ireo Maraokana blaogera. Nifanakalozan-dry zareo hevitra koa ny mikasika ireo olana saropady toy ny maha-pelaka ao anaty tontolo iainana mpandala ny nentim-paharazana. Nanoratra blaogy mikasika ny Rif i Samir, izay ny roa ampahatelon'ireo mpamboly dia mpamboly ‘cannabis’ (karazana rongony) avokoa, raha toa i IBAHRINE nanipika ny andraikitra revolisioneran'ny aterineto ao anaty tontolo arabo.
Ry Vehivavy… tianay ianareo!
Manana fomba tena azy manokana i Larbi hankalazàna ny andro iraisam-pirenena natao ho an'ny vehivavy. Miangavy ireo mpamaky ny blaoginy izy mba hanoratra mikasika ireo vehivavy blaogera izay heverin'izy ireo ho miavaka. Ary mifototra amin'ny hamaroan'ireo tsikera voarain'ny lahatsorany, azoko lazaina fa tena ankafizina sy omen-kaja tokoa ireo vehivavy maraokana izay manao blaogy!!
Anokanan'i Bisma tononkalo mahafinaritra iray ireo vehivavy i izay ho tsaroanareo indray andro any rehefa izy manonofy ny eo anilanareo mandrakariva iny [amin'ny fiteny Frantsay].
Ankalazain'i Anima ilay vehivavy Palestiniana Oum Ibrahim (amin'ny fiteny arabo) izay mandà ny hitoroka ny zanany lahy, raha i Bluesman kosa indray manambara fa nofy ratsy izany hoe tsy hisy vehivavy izany eto an-tany!
Pelaka ao Maraoka
Manomboka mandefa adihevitra ety anaty aterineto mikasika ny fitiavana olona mitovy fananahana amin'ny tena ao Maraoka i Lemrina (amin'ny fiteny Frantsay). Maherin'ny dimampolo ireo fanehoankevitra voarain'ny blaoginy, ny ankamaroan'izy ireo dia ahitana taratra ny finiavana ananan'ireo mpanoratra mba hiady hevitra mikasika ny hoe “nhy maha-pelaka ao Maraoka” ary lasa lavitra mihoatra noho ny resaka fadifady.
Nihaona tamin'i Samira i Anima, vehviavy Maraokana mitia vehivavy ary nanana fifanakalozankevitra iray nahaliana niaraka taminy. Manoratra bilaogy mikasika ny tantaran'io ankizivavy io izy, izay naolan'ny anadahiny (amin'ny fiteny arabo) fony izy mbola vao 6 taona monja.
Miady amin'ny rongony hatramin'ny…..fara-fofonaina?
Mandeha any Aostralia foana i Samir, nefa tsy vitany ny tsy hanao fanamarihana mikasika ny tantaranà fanentanana ady amin'ny rongony ao Maraoka. Raha toa ireo ezak'i Maraoka mikasika ny famongorana ny fambolena rongony ka nankasitrahana tany ivelany, manamafy ireo sangany indrindra mpamokatra rongony erantany fa hiatrika fahoriana ry zareo noho ny tsy fisian'ny fanampiana azy ireo hahita fidirambola hafa ho solony.
Ao Al Koulla sy ireo tanàna hafa, vita amin'ny feta no onenan'ny olona ary mitaingina ampondra manaraka ny làlana mampipararetra vanin-taolana. Maro ireo trano no tsy misy jiro, rano mandeha na toerana fivoahana ary matetika ireo sakafo no tandindomin'ny haintany.
Izany eo ihany, lazain'i Samir fa hiverina haingana eto hatramin'ny zoma ny The View From Fes. Vaovao tsara!
Mandefa lahatsoratra iray i IBAHRINE miresaka ny fomba maha-mety ho tombontsoa ara-tantara ny aterineto ho an'ny liberalisma arabo.
Mora hazavaina kokoa ny fahefàna tsy refesi-mandidy sy ny sekta ary ny foko noho ny liberaly, ary tena sarotra kokoa ny mametraka fitokisana ao anatin'ireo tsena mercuriels sy fampiroboroboana ireo fifanomezan-tànana demokratika noho ny amin'ireo mpitarika am-panahy, ireo mpitondra fivavahana mpanonofy antoandro, sy ireo anti-panahy igagàna. Sarotra takarina ihany koa ny fototra ara-tsain'ny tontolo liberaly noho ny fiantraika ara-kolontsainy sarotra ialàna. Ary ny fisarantsarahana tao anatiny izay nomasahan'ny Baathisme, ny Bilamo ary ny fizarazarana ara-pokon'ny Arabo.
Tiako ampahafantarina anareo ny blaogy iray hitako. Abdessamad Bencherif no mpanoratra, mpanao gazety “kintan'ny ao amin'ny fahitalavitra Maraokàna 2M. Amin'ny fiteny Arabo ny blaogy atao hoe The world of Abdessamad Bencherif (rohy efa tapaka, bilaogy nofoanan'ny tompony) ary vaovao fanavaozana momba ireo olana Maraokana sahala amin'ny fifindramonina tsy ara-dalàna mankany Eoropa na ny fifandirana miaraka amin'ny Polisario.
Izay indray ny androany. Amin'ny manaraka indray mihaona…, inshallah.